यात्रु नपाएपछि सुमो चालकको यस्तो रीस - 'गाडी बेचेर विदेश जान्छु' | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
(August 22, 2019)
यात्रु नपाएपछि सुमो चालकको यस्तो रीस - 'गाडी बेचेर विदेश जान्छु'
बैशाख २१, २०७५ शुक्रबार १९:२:५३ | सन्जिता देवकोटा
चैत ९ गते सर्लाही जानुपर्ने थियो । सुमोमा फोन गरेर टिकटको बारेमा बुझें । सुमोका मान्छेले भने ‘सात नम्बर सिट मात्रै बाँकी छ ।’
सुमोमा त्यो पनि लास्टको सिट । नाक खुम्च्याउँदै हुन्छ राखिदिनुन भनें । नाम र नम्बर पनि दिएँ । भोलिका लागि त्यो सिट मेरै लागि भयो । ९ गते बिहान झोला बोकेर बल्खु पुगें । चोकमा ओर्लन नपाउँदै एकजना ब्यागै समात्न आइपुगे । कहाँ जाने हो ? यता सिट खाली छ ।
‘सर्लाही जाने हो,’ मैले भनें ।
अलिक ठूलो ब्याग बोकेर हिँड्ने बित्तिकै सिट खाली छ भन्दै आएका मानिस गाडी चालक नै रहेछन् । चालकले मलाई यसरी पच्छ्याए कि म उनको कुरा नसुनी जान सकिनँ । शिखरापुर यातायातको उनले चलाउने सुमो सर्लाही नै जाने बताए ।
खाली रहेको सिट नम्बर सोधें ।
मैले अघिल्लो दिनदेखि नै खोजेको सिट नम्बर उनकै गाडीमा मिल्यो । सिट नम्बर ६ । ड्राइभरको ठ्याक्कै पछाडि झ्यालैमा । यत्ति भएपछि अघिल्लो दिन नाक खुम्च्याई खुम्च्याई रोजेको सात नम्बर सिटमा म किन जान्थें र ।
सिट पनि खोजेकै भेटियो । चालकका गफ पनि कम्ता मिठा थिएनन् । जाने गाडी यही हो भनेर उनले देखाएको सुमो साह्रै पुरानो देखिन्थ्यो । नचढँु नचढुँ लाग्ने । तर चालकको गफले भने त्यो पुरानो सुमोलाई पनि नयाँ बनाइरहेको थियो । रातो रंगको सुमो खाली थियो । दुई जना यात्रु बल्ल जम्मा पार्दै थिए । तर पनि उनी अरु सात जना यात्रु भर्खरै खोजेर गाडी १० मिनेटमै कुदाइहाल्छु झैं गर्थे ।
आम्दानी र खर्च गर्ने काइदा बुझेपछि सर्लाहीमा परदेशीका परिवारलाई भेट्न मलाई पनि कहिले पुगौं भइरहेको थियो ।
सिट नम्बर सातबाट तीन पटक फोन आयो । मैले उठाइन । झण्डै साढे दुई घण्टा ६ नम्बरको सिटलाई कुरें । उनले मलाई जस्तै गरी अरु ६ जनालाई सुमोमा राखे । बिहान ८ बजेदेखि कुरेको त्यो सुमो ११ बज्नै लाग्दा बल्ल स्टार्ट भयो ।
अघिसम्म शान्त भएका चालक गाडी स्टार्ट गरेपछि सुमोको रंग जस्तै रातो भए । हुईंक्याउँदै गाडी सडकमा निकाले । उनको गाडी चलाउने शैली र व्यवहार बल्ल थाहा भयो ।
दुई घण्टा अघिसम्म मिठो बोलेका चालकको फेरिएको लवजले म पनि सुमो जस्तै रातो भएँ । सकुशल सर्लाही पुग्न सकुँ भनेर मनमनै कामना गरें ।
चोभारको ओरालोसँगै चिल्लोबाटो सकियो । त्यसपछि सुरु भयो कच्ची बाटो । कच्ची बाटोमा हुइँकिएको सुमोको गतिले मुटुमा ढ्याँग्रो बज्न थाल्यो । खाल्डाखुल्डीमा सुमोका सबै पाटपूर्जा फुत्तै झर्छन कि झैं लाग्ने ।
अझ रिसाएका चालकको अनुहार र उनले बोलेका शब्दहरु । उनले बारम्बार बोलेको शब्द एउटै थियो, ‘अब यो गाडी बेचेर अरब जान्छु ।’
काउन्टरबाट थोरै मात्रै कमिसन दिएर पो हो कि उनी यसरी रिसाएका । या गाडीमा सात जना यात्रु मात्र भए, घाटा भयो भनेर हो । यस्तै केही होला भनेर कारणबारे सोच्न छाडिदिएँ ।
अब डर त सर्लाहीसम्म कसरी पुग्छु भन्नेतिर थियो । गाडी बेचेर अरब लाग्छु भन्ने उनको शब्द र गाडी चलाउने तरिकामा मिसिएको रीस !
उनले रीसमा बलेका शब्दले मलाई चाहिँ अरबमा गाडी चलाउँदा जेल परेका नेपालीका समाचार झलझली सम्झिएँ ।
सवारी चलाउने काममा विदेश गएका थुप्रै नेपाली बिभिन्न कारणले जेल परेका छन् । कोही नेपाल फर्किन लाखौ रुपैयाँ ब्लडमनी बुझाउनु पर्ने त कोही मृत्यु दण्ड कुरिरहेका छन् ।
यस्ता नेपालीको कथा सम्झँदै आँखाले सुमो चालकलाई नियालिरहेँ । उनी भन्दै थिए, ‘यही गाडी चलाएपनि विदेशमा त महिनामा झ्याप्प पैसा हात पर्छ ।’
झ्याप्प पैसा कमाउने सपना बोकेर पराइदेशमा पुगेर दुःख पाएका भन्दा उनी निकै भाग्यमानी थिए । उनीसँग हातमा सीप छ । देशमै गरिखाने बाटो पनि समाएका छन् । तर पनि उनी खै किन विदेश नै ठीक देखिरहेका छन् ।
जेलमा घर फर्किने बाटो कुरिरहेका नेपालीहरु पनि यी चालकले जस्तै सोचेर गएका थिए होलान् त । विदेश पुगेपछि मात्रै धेरै कमाइन्छ भन्ने सोचलाई त्याग्ने हो भने त यी चालकले जस्तै बाटो समाएका युवाले देशमै गरिखानसक्थे नि ।
हुन त उनले हामीलाई पनि गन्तव्यसम्म पुर्‍याएनन् । सर्लाही नै पुग्छ भनेर सुमोको टिकट काटेपनि उनले रौतहटको चन्द्रनिगाहपूरमा लगेर हामीलाई छाडिदिए ।
उनले आधाबाटोमा छाडेपनि मैले मेरो यात्रा पूरा गरें । तर उनी त समाएको बाटोपनि बीचमै छाड्ने योजना बनाउदै थिए । यो एकछिनको झोंक थियो कि सधैंको बानी मैले थाहा पाइनँ । तर यदि यो बानी छोडेनन भने त उनको सुमोमा चढ्ने धेरै यात्रुको यात्रा असुरक्षित बनाउने छन् ।
अनि यो बानी त्यागेनन् भने उनले सोचेको विदेश यात्रा पनि पक्कै सुरक्षित हुने छैन । किनकि विदेशमा सानो गल्तीले सयौं नेपाली क्षतिपूर्ति र ब्लडमनी तिर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । उनीसँगको त्यो यात्राले महिनादिन बितिसक्दा पनि मलाई झस्काइरहन्छ । लाग्छ, उनको यही रीसले फेरि अर्को दुखद समाचार लेख्नुपर्ने त हैन ।
अन्तिम अपडेट: साउन १५, २०७६
मलेसियामा विषाक्त रक्सीका कारण बिरामी भएकामध्ये चार जनाको अवस्था गम्भीर
असोज ६, २०७५ शनिबार
उखु किसान र चिनी उद्योगीको वार्ता विना निष्कर्ष
राष्ट्रपति भण्डारी र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच भेटवार्ता
भदौ ५, २०७६ बिहिबार
बिहीबार कोरियन वन बाहेक सबै विदेशी मुद्राको भाउ घट्यो
भारतका पूर्व वित्तमन्त्री चिदम्बरमलाई विशेष अदालतमा पेस गरिँदै
यू– १९ एसिया कपका लागि नेपाली टिमको घोषणा, काे–काे परे ?
नेपाल एअरलाइन्सको जापान उडान : ‘घाटा हुन्छ भनेर जहाज उडाएन ...
पर्वतमा पहिरोले घर पुर्‍यो, एक जना बेपत्ता
गेर्खु खोला ‘डाइभर्सन’ बाढीले बगाएपछि पासाङल्हामु राजमार्ग अव...
सानिमा लाईफको नयाँ बीमा योजना, वार्षिक धन फिर्ता हुने
सोलुखुम्बु केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्पको धक्का
मौसम : देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली, मध्य र पश्चिमको केही ठा...
अछाममा जीप दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु
रसुवागढी नाका जोड्ने सडक पहिरोले अवरुद्ध
संसदबाट पास भयो भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने विधेयक
यू-१९ एसिया कप : नेपालकाे समूहमा बंगलादेश, श्रीलंका र यूएई
मीका सिंहसँग काम गरे सलमान खानमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइने चेतावनी
यस्तो छ बुधबारकाे विदेशी मुद्राको भाउ